Kuekisesaiza - Bezzia | Bezzia
Kurovedza muviri chinhu chine hutano mumuviri wedu uye zvakare chinoita kuti tioneke zvakanaka. Sezvo isu tichida kutarisira chimiro chedu uye aesthetics, uyu musoro unokosha pakuita magazini yemadzimai. KuBezzia, tichabata iyo kurovedza muviri sepakati pechinangwa chedu chekuzvitarisira isu pachedu.
Kunze kwekuratidza iwe akasiyana mikana ye dzidzira kurovedza muviriIsu tinokuratidza nzira yekuzviita nemazvo, mbatya kana zvinhu zvakakosha kuti uzviite uye zvimwe zvinhu zvingamuka. Uye zvakare, isu tichasimbisa kukosha kwekuita iko kurovedza kunonakidzawo, nekuti izvi zvinokanganisa kugadzikana uye kujairika kwatinoita nako.
Tinokukoka iwe kuti upinde munyika ino inonakidza.
Matipi ekudzidziswa muzhizha
Ichokwadi kuti vanhu vazhinji vanotora zororo shoma, kana basa ravo richibvumira. Asi zvakadaro, kurovedza ...
Maitiro ekuita kurovedza muviri kumba
kubudikidza Tony Torres inoita 5 mazuva .
Munguva pfupi yapfuura vanhu vazhinji vakachinja maitiro avo emitambo, vachitsvaga nzira yekurovedza muviri mu ...
Iwe unoda kuziva here kuti ndeapi akanyanya kurovedza muviri kuti uderedze huremu makumbo? Nhasi uchazozviziva nekuti ndezve ...
Zvakanakira tsika yekufamba
kubudikidza Susana Garcia inoita 1 vhiki .
Tsika yekufamba ndeimwe yezvakanyanya kukosha kana zvasvika pakusimbisa muviri zuva nezuva uye iri ...
Makomborero ekumiswa kudzidziswa
Iwe unoziva zvakanakira zvekumiswa kudzidziswa? Zvinotaridza sekunge yakazvimisikidza seimwe yemazano makuru eiyo ...
Basa rekudzidzisa, zvarinazvo uye nemabatiro aungaita pamba
kubudikidza Tony Torres inoita Mavhiki e2 .
Basa rekudzidzisa rauya kuratidza kuti kuti uwane chimiro, hazvidi kuti uite mafambiro akaomarara ayo ku ...
Iwe unoziva here hutano hunobatsira nekutenderera? Icho chimwe chezvirevo izvo zviripo muhuwandu hwakawanda ...
kubudikidza Tony Torres inoita Mavhiki e3 .
Kana iwe uchitsvaga iko kurovedza kunokubatsira iwe taura mhasuru dzako, kurasikirwa yakawanda macalorie uchiita mitambo uye kuwedzera ...
Bhenefiti eMuviri Pump makirasi
Kune zvakawanda zvakajairika zvekuti tinogona kuzviwana isu tisingazive kuti tosarudza ipi! Naizvozvo, nhasi tinotaura nezve mabhenefiti ...
Chii chaizvo chinonzi simba rekudzidzisa? Tsvaga mabhenefiti ayo
kubudikidza Tony Torres inoita Mavhiki e4 .
Kune vanhu vazhinji, kudzidziswa kwesimba kunoratidzwa kune vanhu vari kutsvaga kutsanangura tsandanyama dzavo. Zvisinei, ndinoziva ...
Mabhenefiti emabhanhire akasununguka
Chokwadi rimwe nerimwe remitambo yako rinofambidzana neyekuwedzera seichi Hazvishamise nekuti iyo ...
Zvirinyore kurovedza muviri kuzorodza mutsipa